RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guuldarrada kala soo kulanka Everton ee Premier League…. (Gunners oo laga dhaliyey goolkii ugu horreeyey ee…) – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal guuldarrada kala soo kulanka Everton ee Premier League…. (Gunners oo laga dhaliyey goolkii ugu horreeyey ee…)
(Liverpool) 14 Dis 2016 – Everton ayaa garoonkeeda Goodison Park ku garaacday kooxda Arsenal oo marti u ahayd, iyadoo Gunners ka hor joogsatay inay hoggaanka horyaalka ku meel gaar u qabato.
Kooxda Arsenal ayaa goolka la horreysay waxaana 20’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta laad xor ah (Free Kick) u dhaliyey Alexis Sanchez, laakiin labo madax oo ay u kala dhaliyey Seamus Coleman iyo Ashley Williams ayey Everton guul soo laabasho ah kaga gaartay Gunners.
>- Ashley Williams ayaa goolkiisii ugu horreeyey Premier League u dhaliyey kooxdiisa Everton, waana midkii ay guusha kaga qaateen Gunners oo uu dhaliyey daqiiqaddii 86’aad.
>- Labo kulan oo kaliya ayaa kooxda Arsenal laga adkaaday xilli ciyaareedka Premier League, waxaana labadaas guuldarro ay ka soo gaareen kooxaha Merseyside-ka ka wada dhisan ee Liverpool iyo Everton.
>- Kooxda Arsenal ayaa markii ugu horreysay laga dhaliyey Premier League gool laga soo tuuray koorno ama gool ka yimid gees laad xilli ciyaareedkan.
>- Leighton Baines ayaa kulankan sameeyey gool caawintiisii 48-aad ee Premier League, waxaana uu afar ka badan yahay difaac kasta oo kale.
>- Seamus Coleman ayaa dhaliyey labo gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka Premier League uu ku ciyaaray garoonka kooxdiisa ee Goodison Park.
>- Seamus Coleman ayaa dhaliyey 3 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, kaliya Romelu Lukaku ayaa ka goolal badan xiddigaha ay ka wada tirsan yihiin kooxda Everton, kaasoo dhaliyey 9 gool.
>- Alexis Sanchez ayaa dhaliyey goolkiisii 12-aad ee Premier League xilli ciyaareedkan, ma jiro ciyaaryahan ka goolal badan.
>- Ma jiro ciyaaryahan ka badan Alexis Sanchez ee dhaliyey goolasha ugu horreeya kulamada ama goolka daah furka ciyaarta xilli ciyaareedkan Premier League, waxaana Sanchez uu xilli ciyaareedkan goolka daah furka ciyaarta dhaliyey 5 jeer.
>- Alexis Sanchez ayaa dhaliyey ama caawiyey 27 gool 27-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo uu u dheelay kooxdiisa Arsenal, waxa uu dhaliyey 19 gool, isagoo caawiye ka ahaa 8 gool oo kale.
EPL: Everton oo garoonkeeda Goodison Park ku garaacday kooxda Arsenal, xilli Gunners laga hor joogsaday inay hoggaanka horyaalka ku meel gaar u qabato… + SAWIRRO
HOR DHAC: Sunderland Vs. Chelsea